Soo dejisan Router Keygen 1.1 – Vessoft
Soo dejisan Router Keygen
Router Keygen – software ah in decrypt lambarka sirta ah ee shabakadaha Wi-Fi. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay curiyaan xukunka noocyada WPA ama WEP loogu daydo kala duwan ee router, sida Thomson, DLink, Pirelli uga wadahadlan iyo kuwa kale. Router Keygen isticmaalaan keydka macluumaadka kala duwan ee lagu daydo qaar ka mid ah router oo lagama maarmaan u yihiin decrypt lambarka sirta ah ee ka network Wi-Fi. Software ayaa u saamaxaaya in ay qaado furaha shabakadda hoos shardi ah in aad isticmaasho password default ee router, haddii la isticmaalayo sirta bedelay decryption waxay u badan tahay in ay ku fashilmaan. Router Keygen kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan xidhiidhada internet ka baxsan si ay u xaliyaan dhibaatooyin badan oo kala duwan.
Doorashada WPA iyo WEP muhiimka ah
Taageerada daydo kala duwan ee router
Isticmaalka ah set oo ah database-ka
Router Keygen Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Hamachi 2.2.0.526
Windows Repair 3.9.12 Standard iyo Portable